ထားဝယ်အမှတ်တရ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Posts Tagged "ထားဝယ်အမှတ်တရ"	12
ရေးမြို့ရောက်တုန်း ဟိုရိုက် ဒီရိုက် (၂)
Comments By Postကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - ဦးဦးပါလေရာ - ခရီးသည်ကြီးမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - KZ - ဘဲဥကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - ဘဲဥ - KZလူပါး ပုလင်းကွဲရှ - KZ - ဦးဦးပါလေရာအတ္တဆန် - Khaing Zar Win - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးလုပ်စားခံလိုက်ရတဲ့ ...... မဟာဆန်.... - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - ဦးဦးပါလေရာ - Foreign Residentမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - Phoe Thitsar - Myo Thantမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - black chaw - N@ng Ghi Ghi Joe Zကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သန္ဓေသားအတွက် အဟာရ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - Foreign Resident - parlayar 46အဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - ဦးဦးပါလေရာပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - Myo Thantမင်္ဂလာပါ - ဘဲဥ - jujumaယုံလား? - အရီးခင်လတ် - အရီးခင်လတ်သူ - ရွှေ ကြည် - Mobile13ရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ရွှေတိုက်စိုးစက္ကန့်သုံးရာ ဘာဝနာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဥက္ကဌ (ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး)ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - MaMa - N@ng Ghi Ghi Joe ZCongress - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - parlayar 46East West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities